‘के साह्रो राम्री चोलीमा’ सार्वजनिक
काठमाडौं : गायिका मिना राई र गायक आङगेलु शेर्पाको ‘के साह्रो राम्री चोलीमा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । नयाँ वर्षको कोसेली स्वरुप आफ्ना दर्शक, श्रोताका लागि गायिका राई र गायक शेर्पाले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गीत गायिका राईको आफ्नै युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको छ । मिना राईको शब्द, संगीत रहेको गीतमा केकी अधिकारी, उमेश राई ‘फुलन्देकी आमा’ आदिको अभिनय रहेको छ । अनिल कोय राईको निर्देशन रहेको यसमा सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी, राजु कार्कीको एरेनजर, अमृत चापागाईको सम्पादन, दिनेश पराजुलीको छायांकन रहेको छ ।
पुर्वेली मारुणी सेलो भाकामा आधारित रहेकोले यसलाई दर्शक, श्रोताहरुले आफ्नो अघिल्ला सिर्जनाहरुलाई मन पाराए जस्तो ‘के साह्रो राम्री चोलीमा’लाई पनि मनपराउनेमा गायिका राई विश्वस्त छिन् ।
चिती सांस्कृतिक कला केन्द्रको ‘लमजुङ चिती घर’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं : चिती सांस्कृतिक कला केन्द्रको प्रस्तुतिमा ‘लमजुङ चिती घर’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘लमजुङ चिती घर’ गीतमा कृष्ण काले र मनिषा गजमेरले स्वर दिएका छन् ।
लमजुङको परिवेश झल्काउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक गरिएको उक्त गीतको भिडियोमा लमजुङको कला संस्कृतिलाई उजागर गरिएको छ । गीतमा नेपालकै लोकप्रिय बाजा पञ्चेबाजाको मिठो धुनसमेत सुन्न सकिन्छ ।
लोक दोहोरी शैलीको उक्त गीतको भिडियोमा नविन परियार र सरस्वती चिनाल फिचर्ड छन् । कमल घिमिरेले संगीत भरेको उक्त गीत अर्जुन थापाले एरेन्ज गरेका हुन् । पुरुषोतम पन्तको नेतृत्वमा गीतको भिडियो छायांकन गरिएको हो ।
लेकाली स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको उक्त गीतमा मान बहादुर बराल मगरको मिक्सिङ रहेको छ । अर्जुन थापाको निर्देशनमा तयार भएको उक्त म्युजिक भिडियोलाई सुशील डाँगीले खिचेका हुन् ।
नानीमायाको नयाँ नेवारी गीत सार्वजनिक
काठमाडौं : गायिका नानीमाया महर्जनको नयाँ नेवारी गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको ‘भाजु छिथाय् जि वया’ बोलको गीतमा स्वयं नानीमायाले नै शब्द र संगीत भरेकी छन् ।
सुरज नापितले निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा सरोज ढुंगाना, रोजिशा महर्जन, नानीशोभा महर्जन, युलशी गैरे र नारन विष्टको कुशल अभिनय देख्न सकिन्छ ।
विरेन शाक्यले एरेन्ज गरेको उक्त म्युजिक भिडियो राजेन्द्र डंगोलले गरेका छन् भने भिडियो सम्पादन पनि स्वयं डंगोलले नै गरेका छन् । उक्त म्युजिक भिडियो हाइलाइट्स नेपालको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
एनआरएनए ग्लोबल सिंगिङ आइडलको तयारी तीव्र, सहभागी बढदै
दोहा (कतार) : गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, मध्यपूर्व क्षेत्रीय युवा विभागले 'नेपाली कला संस्कृति संरक्षण र पहिचान एनआरएनए दोस्रो पुस्ताको अभियान' भन्ने मूल नाराका साथ 'ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडल, सेकेन्ड जेनेरेसन – २०२१’ पहिलो संस्करणको आयोजना गर्ने भएको छ ।
संस्करणमा सहभागी हुन डिजिटल अडिसनबाट भिडियो पठाउने मिति ३० अप्रिलसम्म बढाइएको एनआरएनए मध्यपूर्व युवा समिति संयोजक राज रेग्मीले जानकारी दिए ।
आइडलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि सबै क्षेत्रको सुझावका आधारमा अडिसनको मिति ७ दिन थप गर्दै ३० अप्रिल सम्म पुर्‍याइएको उनले बताए ।
साथै पुरस्कार राशी पनी बढाएर ७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने दोस्रो पुरस्कार चार लाख, तेस्रो पुरस्कार दुई लाख, चौथो पुरस्कार एक लाख र पाँचौँ पुरस्कार ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । आइडलको निर्णायकहरूमा गायक उदय सोताङ, गायिका सुनिता दुलाल, गायिका प्राश्ना शाक्य र गायक विजय लामा रहेका छन् ।
यस्तो छ सहभागिता सम्बन्धी नियम
सार्क मुलुक बाहेकका गैर आवासीय नेपाली संघ गठन भएका सबै राष्ट्रबाट प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाइने छ । विश्वभरका ६ वटा क्षेत्रीय समितिहरुबाट सहभागिता रहनेछ । प्रत्येक क्षेत्रीय समितिबाट कम्तीमा १२ जना प्रतियोगीहरु सहभागी हुन पाउनेछन् भने उपलब्ध भएसम्म समितिले अधिकतम प्रतियोगीहरुलाई सहभागी गराउन सक्नेछ ।
यस्तो छ प्रतियोगी छनोट प्रक्रिया
१. डिजिटल राउण्ड
प्रत्येक प्रतियोगीहरुले डिजिटल अडिसनका लागि गीत अनुसारको नेपाली पोषाकसहित आफ्नो नाम, आफु रहेको राष्ट्रको नाम, गीतको बोल, ओर्जिनल गीतका सर्जक तथा गायक–गायिकाको नाम उल्लेख गरी ३ मिनेट सम्मको सम्पादन नगरिएको सफा र प्रष्ट नेपाली भाषाको भिडियो आ–आफ्नो राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पठाउनु पर्नेछ ।
प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले उक्त भिडियो क्षेत्रीय समितिलाई छनोटका लागि पठाउने र प्रत्येक क्षेत्रीय समितिले छनोट भएको भिडियो क्लिप आयोजक कमिटीको इमेल ठेगाना [email protected], [email protected] मा पठाउनु पर्नेछ ।
प्रत्येक क्षेत्रीय समितिले कम्तीमा १२ जना प्रतियोगी पठाउनु पर्ने र उपलब्ध भएसम्म समितिले अधिकतम प्रतियोगीहरुलाई सहभागी गराउन सक्नेछन् । आयोजक कमिटीले प्राप्त प्रतियोगीहरुको भिडियो क्लिपलाई निर्णायक मण्डललाई पठाउने छ ।
डिजिटल अडिसनको भिडियोलाई निर्णायक मण्डलले मुल्यांकन गर्दै पहिलो चरणमा प्राप्त प्रतियोगी मध्येबाट ५० जना प्रतियोगीहरुलाई मात्र छनोट गरी ओपनिङ राउण्डमा लैजाने छ । छनोट भएका ५० जना प्रतियोगीहरुको नामावली मे ५ मा प्रकाशन गरी आयोजक समितिले प्रत्येक क्षेत्रीय समितिहरुलाई जानकारी गराउनेछ ।
२. ओपनिङ राउण्ड
ओपनिङ राउण्डलाई ३ चरणमा बाँडिने छ । जस अन्तर्गत अन्तरा, सारेगम र पियानो राउन्ड रहने छन् । अन्तरा राउण्डमा डिजिटल राउण्डबाट छनोट भएर आएका ५० जना प्रतियोगीहरुले प्रवेश पाउने छन् भने यस राउण्डमा थप एक–एक गीतको प्रस्तुति दिए पश्चात यस राउण्डबाट १० जना प्रतियोगीहरु बाहिरिनेछन् । बाँकी ४० जना प्रतियोगीहरुले ओपनिङको सारेगम राउण्डमा प्रवेश पाउनेछन् ।
सारेगम राउण्डमा अन्तरा राउण्डबाट छनोट भएर आएका ४० जना प्रतियोगीहरुले प्रवेश पाउने छन् भने यस राउण्डमा थप एक–एक गीतको प्रस्तुति दिए पश्चात थप १० जना प्रतियोगीहरु बाहिरिनेछन् । बाँकी ३० जना प्रतियोगीहरुले पियानो राउण्डमा प्रवेश पाउनेछन् । पियानो राउण्डमा प्रवेश पाएका ३० जनाले स्वतः गाला राउण्डमा प्रवेश पाउनेछन् । यो राउण्ड भर्चुअल मार्फत १४ मे २०२१, नेपाली समय अनुसार विहान ११ बजे शुरु हुनेछ ।
३. गाला राउण्ड
गाला राउण्डलाई ३ चरण- प्रथम दोस्रो र तेस्रो राउण्डमा विभाजन गरिएको छ । प्रथम गाला राउण्डमा प्रवेश गरेका ३० जना प्रतियोगी मध्ये ५ जना प्रतियोगीहरु बाहिरिने छन् भने बाँकी २५ जना प्रतियोगी दोस्रो गाला राउण्डमा प्रवेश पाउनेछन् । दोस्रो राउण्डमा प्रवेश गरेका २५ जना प्रतियोगी मध्ये दोस्रो गाला राउण्डबाट ५ जना प्रतियोगिहरु बाहिरिने छन् भने बाँकी २० जना प्रतियोगी तेस्रो गाला राउण्डमा प्रवेश पाउनेछन् ।
तेस्रो गाला राउण्डमा प्रवेश गरेका २० जना प्रतियोगी मध्ये तेस्रो गाला राउण्डबाट ५ जना प्रतियोगिहरु बाहिरिने छन् भने बाँकी १५ जना प्रतियोगी ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश पाउनेछन् । यो राउन्ड १५ मे २०२१, नेपाली समय विहान ११ बजेबाट शुरु हुनेछ ।
४. ग्राण्ड फिनाले
२१ मे २०२१, नेपाली समय विहान ११ बजेबाट शुरु हुने ग्राण्ड फिनाले राउण्डलाई ३ चरणमा विभाजित गरिएको छ । जसमा फाइनल राउण्डको अन्तिम चरणबाट ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश पाएका १५ जना मध्ये पहिलो चरणबाट ५ जना प्रतियोगीहरु बाहिरिने छन् भने दोस्रो चरणमा प्रवेश पाएका १० जना मध्ये थप ५ जना दोस्रो चरणबाट बाहिरिने छन् । फिनालेको दोस्रो चरणबाट अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका ५ जना प्रतियोगीहरुलाई क्रमशः पाँचौ, चौथो, तेस्रो, दोस्रो र पहिलो गरी विजेता घोषणा गरिने छ ।
निर्णायक मण्डलले प्रत्येक राउण्डमा सार्वजनिक पपुलर मतलाई ४० प्रतिशत आधार मान्दै ६० प्रतिशत निर्णयाधिकार मात्र प्रयोग गरी निर्णय सुनाउने व्यवस्था गरिएको एनआरएनए मध्यपुर्व संयोजक प्रवीण गुरुङले जानकारी दिए । ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश पाउने ५ जना प्रतियोगीहरुलाई गीति एल्बममा गीत गाउने अवसर दिइने छ ।
डा. रानी शाक्यको सांगीतिक यात्रा
काठमाडौं : डा. रानी शाक्यको परिचय बदलिएको छ । गायिका रानी शाक्यको नामले स्थापित त्यो नाम आम संगीतप्रेमी श्रोत्राहरुको लागि नौलो लाग्दैन । पेशाले चिकित्सक उनी सांगितिक आकाशमा आङ्खनै रङ्खतारमा उडिरहेकी छिन् । सानैदेखि गीत संगीत भने पछि हुरुक्क हुने शाक्य स्कूल कलेज जीवनमा गायिका सुक्मित गुरुङ, स्व.अरुण लामा स्व.तारादेबीका गीतहरु खुब गाउँथिन् ।
काठमाडौंको नरदेबीमा जन्मीएकी शाक्यको पहिलो गीत ‘फेरि आज एकान्तमा’ हो । जसमा ओम कर्माचार्यको संगीत र लक्ष्मी श्रेष्ठको शब्द रहेको छ । सानैदेखि गीत गाउने रहर हुँदाहुँदै पनि २०१७ मा गीत रेकर्ड गर्न पुगेकी डा. शाक्यले एनेस्थेसियोलोजिस्टको रुपमा गंगालाल हार्ट सेन्टर, टिचिङ हस्पिटल मेडिकेयर हस्पिटलमा कुनै दिन आबद्ध रहेर बिरामीहरुको सेवामा आफुलाई समर्पित गर्दथिन् ।
हाल अमेरिकाको मेरील्यान्डमा बसेर नेपाली गीत संगीत र आङ्खनो पेसामा सकृय उनी हरेक किसिमका गीत गाउन रुचाउँछिन् । एक सय भन्दा बढी गीत गाइसकेकी शाक्यले थु्रपै नेपाली चलचित्रमा समेत आङ्खनो सुमुधुर आवाज दिइसकेकी छन् । सांगीतिक क्षेत्रमा अघि बढ्न विषेश गीतकार लक्ष्मी श्रेष्ठ र श्रीमान डा. राजेश शाक्यको ठूलो योगदान रहेको उनी बताउँछिन् ।
नेपालका चर्चित संगीतकार न्यू बज्राचार्य मधु क्षेत्री ओम कर्माचार्य विक्रम थापा दिपक शर्मा विकाश चौधरी लगायतका थ्रुपै संगीकारको संगीतमा आवाज दिईसकेकी शाक्य पप लोक कलासिकल आधुनिक हरेक किसिमका गीतमा आवाज दिईसकेकी छन् । डा. शाक्यका चर्चित गीतहरुमा यो वैशको मात लाग्यो, पहिलो माया साँची राखें, फुल होइन मेरो माया, सल्लाघारी लगायतका रहेका छन् । हालसालै बजारमा आएको लाहुरे एल्बमको समयले भए म लाहुरे, उडु उडु लाग्छ डुलुडुलु लाग्छ रमाइलो चियाबारीमा, सुहाउँदैन ओेठमा हासो गीतले गायिका रानी शाक्यलाई नेपाली सांगीतिक आकाशमा थप उचाई प्रदान गरेको छ ।
गायिका शाक्यले चियावारी गीत मार्फत लोकप्रिय गायिकाको नेशनल इन्टरटेनमेन्ट अवार्ड स्र्पस म्युजिक भिडियो अवार्ड २०२० ढलक ढलक गीतबाट वेस्ट पप गायिकाको अवार्ड जितेकी शाक्यले निम अवार्डमा उत्कृष्ट युगल गायन र विन्दवासीनी म्युजिक अवार्ड वेस्ट पप मोर्डन गायिकामा समेत नोमिनेसनमा परेकी थिइन् । उनका गीतहरु आङ्खनै युटुब च्यालन मार्फत श्रोत्राहरु माझ पस्किदै आएकी शाक्य नेपाली गीत संगीतमा सकृयताका साथ लागिरहने बताउँछिन् ।
दर्शक श्रोत्राहरुको रुचिलाई ध्यानमा राखेर केहि दिनमा केहि नया गीतहरु सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेकी शाक्य सांगीतिक दौडमा साथ दिने सबैलाई सम्झिन चाहन्छिन् । नेपाली गीत संगीतको पछिल्लो अवस्थाबाट उनी बेखुसी छैनन् । नया नया कलाकारहरुको सृजनाले झन नेपाली सांगीतिक क्षेत्रलाई थप उचाईमा पुराएको बताउने शाक्य भारल हुने नाममा जे पायो त्यही गर्न नहुने बताउँछिन् ।
पछिल्लो समयमा आएका कतिपय गीत संगीतबाट आफु खुसी नभएको उनी बताउँछिन् । अबका दिनमा नेपाली गीत संगीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रवेश पाउने किसिमका गीतहरु बजारमा ल्याउने योजनामा रहेको बताउने शाक्य आङ्खना गीतहरुबाट सन्तुष्टि छन् । दर्शक श्रोत्राहरुको मायाले थप हौसला बढेको बताउदै उनले भनिन नेपाली गीत संगीतमा मेरो यात्रा अन्नत कालसम्म रहिरहने छ ।
‘दिलमा सर्किट बनेर’ सार्वजनिक
काठमाडौं : भीम विसिको शब्द, सागर अधिकारी ‘शरद’को संगीत, प्राञ्जल पोखरेल, एलिना चौहानको स्वर, उदयराज पौडेलको एरेञ्ज र अशोक महर्जनको मिक्सिङ तथा माष्टरिङ रहेको ‘दिलमा सर्किट बनेर’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गीतको भिडियोमा गायकद्वय प्राञ्जल र एलिनासँगै दमोन क्षेत्री, उषा उप्रेतीलाई फिचरिङ गरिएको छ ।
सुरेन्द्र वसेलको निर्देशन रहेको भिडियोमा रामकुमार केसीको छायाँकन रहेको छ भने नवीन निरौलाको सम्पादन रहेको छ । रुपन्देहीको भैरहवमाका स्थायि बासिन्दा प्रञ्जल छिट्टै नै सोलो एल्बम स्रोता/दर्शकमाझ ल्याउने तयारीमा छन् । आफ्ना अन्य गीत जस्तै यो गीतले पनि दर्शक÷स्रोताको साथ पाउने आफूले आशा राखेको प्रञ्जलले बताए ।
बिक्रम र अमृताको ‘मदानिमा नेती’ले चर्चा बटुल्दै
काठमाडौं पछिल्लो समयको साङ्गीतिक बजारमा नेपाली लोक गीत सङ्गीतको चर्चा परिचर्चा बढ्दै गएको छ । माया प्रेम र बिछोडले भरिएका लोक तथा दोहोरी गीत दैनिक जसो बजारमा आइरहेका छन् । त्यसो त रमाइला, नचाउने किसिमका गीतहरु पनि नआएका होइनन् तर दर्शक श्रोताले मौलिक गीतलाई नै बढी रुचाउँछन् ।
यही साङ्गीतिक आकाशमा नयाँ मौलिक गीत थपिएको छ ‘मदानीमा नेती’ । यो गीत एक विशुद्ध गाउँले नेपाली शब्द हो । मोही पार्दा प्रयोग हुने मदानी र नेती शब्दबाट पूरा गीत तयार पारिएको छ ।
नेपाली समाजमा हराउँदै गएको मौलिकतालाई गीतले बोकेको छ । युवा पुस्ताका निकै लोकप्रिय गायक विक्रम परियार र अम्रीता श्रीपालको आवाजमा रहेको नेतीले चर्चा पाइरहेको छ । गीतमा शब्द शरद पाण्डेले कोरेका छन् भने गीतको म्युजिक गायक परियारकै रहेको छ ।
भिडियोमा आफ्नो प्रेमिकाको नजिक अरूले प्रवेश गर्दा रिसको आवेगमा निम्तिएको गम्भीर समस्या र प्रहरीको खोजी सूचिमा रहेका प्रेमी वरिपरि घुम्ने कथालाई फिल्मी शैलीमा प्रवीन थापाले आकर्षक शैलीमा तयार पार्दै निर्देशित गरेका छन् । राजेश घिमिरेले छायाङ्कन गरेको भिडियोमा सुधीर श्रेष्ठ र रबिना भण्डारीको उत्कृष्ट नृत्य देख्न सकिन्छ । गायक गायिकालाई प्रहरीको भूमिकामा पेश गरिएको भिडियो ‘बाबा इन्टरटेनमेन्ट टिभि’ नामक युट्युब च्यानलबाट बजारमा आएको छ ।
एक हप्ते नाटक अभिनय कार्यशाला सम्पन्न
सुर्खेत : सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित एक हप्ते नाटक अभिनय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आयोजना र आरङ्ग नेपाल सुर्खेतको स्थानीय व्यवस्थापनमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । गत १८ गतेबाट शुरु भएको कार्यशालामा नाटकका सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिएको कार्यशाला संयोजक कलाकार यामनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।
गाउँगाउँ नाट्यकर्मी उत्पादन गर्ने उदेश्यले गरिएको कार्यशालामा नेपालका चर्चित नाट्यकर्मी तथा कलाकार निर्देशक राजकुमार पुडासैनीले सहजिकरण गरेका थिए ।
समापन कार्यक्रममा प्रशिक्षणमा सहभागि कलाकारहरुले वन डढेलो र वन सम्पदाको चोरी निकासी तथा वायु प्रदुषणबारे चेतनामुलक नाटक प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनीहरुले नाटक सैद्धान्तिक,व्यवहारिक र प्राविधिक पक्षबारे जानकारी भएको भन्दै यसले आगामी दिनमा नाट्यकर्म गर्ने उर्जा थपेको बताएका थिए ।
राज्यका अन्य निकाय जस्तै नाटक र कला क्षेत्रका संरचना पनि सबै प्रदेशमा स्थापना गर्न दबाब दिने उदेश्य सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यशाला थालिएको मुख्य प्रशिक्षक पुडासैनीले बताए ।
कार्यक्रममा कलाका प्रेमदेव गिरी गंगा केसी, गणेशभक्त गौतम लगायतले कर्णाली प्रदेसको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा संगीत तथा नाट्यप्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र प्राज्ञिक संगठन निर्माणकालागि सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक दबाब दिनुपर्ने औंल्याएका थिए ।
कलाकार उमालाल आर्चाय, डिलबहादुर गुरुङ लगायतले कार्याशालाले कलाकारलाई थप हौसला र प्रेरणा दिएको भन्दै नाट्यकर्ममा लाग्न सुझाव दिएका थिए ।
आरङ्ग नेपालका अध्यक्ष गणेशभक्त गौतमको अध्यक्षता र वरिष्ठ रंगकर्मी प्रेमदेव गरिको मुख्य आतिथ्यतामा तालिम समापन गरिएको हो ।
गायिका दर्शना संगीत कर्ममा
काठमाडौं : पाँच दर्जन बढी फुटकर गीत गाएर सानै उमेरमा आफ्नो पृथक परिचय बनाउन सफल गायिका दर्शना महर्जनले आफ्नै स्वर र संगीतमा मन छुने मर्मश्पस्र्धी गीत ‘ए साथी...’ बोलको लिरिकल भिडियो युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । यसमा ज्योति क्षेत्रीको शब्द, संजय खड्गीको एरेञ्जर रहेको छ ।
केही समय पहिले गायिका दर्शना महर्जनले नेपाल भाषाको गीत सार्वजनिक गरेकी थिइन् । पप आधुनिक सबै खाले भाकाको गीत गाउँदै आईरहेकी भएपनि ‘चुलि जाल न्हां...’ दर्शनाको पहिलो नेपाल भाषाको गीत हो । जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठको शब्द, मनराजा नकर्मीको संगीत, नरेन्द्र महर्जनको प्रस्तुती रहेको भिडियो गायिकाको आफ्नै अफिसियल युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो ।